WARBIXIN: Maxay tahay sababta ay orodyahannada Olymibikada u qaniinaan bilada DAHABKA?+SAWIRRO – Gool FM
WARBIXIN: Maxay tahay sababta ay orodyahannada Olymibikada u qaniinaan bilada DAHABKA?+SAWIRRO
Byare August 15, 2016
(Brazil) 15 Agoosto 2016. David Wallechinsky oo madaxwayne u ah bulshada caalamiga ah ee taariikhyahannada Olombikada ayaa daaha ka rogay sababta ka dambeysa in la qaniino billadaha dahadka ah.
Waxay aalaaba noqotay mid kamid ah sawirada laga soo xigto olombikada in la arko billadaha dahadka oo la qaniinayo. Tartamaa kasta oo ku soo baxay kaalinta koobaad ee tartanka Olombikada ee hadda ka socda Rio dalkasta uu ka soo jeedaba waxa uu si dhaqso leh u sameynayay markuu masraxa soo istaago inuu qaniino billada dahabka ah uu ku guuleystay. Su’aasha ayaa waxay tahay dhaqankaan halkee buu ka yimid?
Waa Asal Raac Taariikheed
In la qaniino billada waa dhaqan u laabanaya taariikh soo jireen ah. Waxay ahayd hanaan si dhaqso ah loogu hubin jiray in lacagihii ka sameysnaa biraha ay lacago sax ah ahaayeen ama kuwo been abuurad ah. Hadda oo la istcmaalo dahabka kaas oo ah bir jilacsan markii loo barbar dhigo kuwii hore ayaa ku habooneyn tijaabo nuucaan oo kale ah.
Maadaama birraha lacagaha aysan ka koobneyn biro qaali ah sida dahabka, waa maxay sababta ay u sii wadaan tartamayaashu dhaqankaas taariikhiga ah?
Waa Rabitaan dhanka Sawir-qaadayaasha ah
David Wallechinsky oo madaxwayne u ah bulshada caalamiga ah ee taariikhyahanada Olombikada ayaa CNN u sheegay in 6 gram oo dahab ah uu ku jiro billada dahabka balse tartamayaashu aysan rabin maanta inay hubiyaan in dahab ku jiro iyo inkale ee hadafka ugu wayn ee loo sameeyo tahay inay qanciyaan sawir qaadayaasha oo rabitaan xoogan u haaya inay arkaan falkaas oo la sameynayo.
“Waxay noqotay mid ay si waali ah u rabaan sawir qaadayaasha,” saas waxaa dhahaya Wallechinsky oo sidoo kale ah Qoraa-wadaaga buuga: The Complete Book of the Olympics.
“Waxaan u malaynayaa inay la tahay sawir taariikhi ah, micnaha sawir iyaga u gadmi kara ama dadka ay ku qancin karaan. Ma u malaynaayo inay tahay wax tartamayaashu ay si shaqsi ah u sameynayaan.”.
W/D: Mohammed Shidane.
Dhageyso Warbixintii Maxamed qadar Ibraahim Daahir uu ka diyaariyay horyaalka Premier league furmay iyo ciyaarihii kale
Imise ayuu garoomada ka maqnaanayaa Aaron Ramsey?